Isikhokelo sikaMarketer ekubeni yiTrust Flow ™ Pro | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 5, 2016 NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2016 UChris Lucas
Iminyaka emibini edlulileyo izise utshintsho oluninzi kwintengiso. Sibonile enkulu ihamba ishukumayo, idrive entsha yomxholo onamandla kunye nefayile ye- umtshato phakathi kwentlalo kunye nezorhwebo. Kodwa olona tshintsho lwenyikima lube kwindawo ye-SEO.
Ngo-2013, uJohn Mueller wabhengeza ukuba uGoogle akasayi kuphinda ahlaziye iPageRank (Isixhobo sePageRank), Inkqubo yayo yokubeka amanqaku kwiphepha lewebhu ngokusekwe kwixabiso Kwaye khange. Endaweni yoko, sinesherifu entsha edolophini: ukuhamba kwetrasti ™.
Yenziwe ngu SEO enkulu, ukuhamba kwethemba™ yitrikhi entsha emisela umgangatho wesiza ngokusekwe kumakhonkco kunye nezinye iisayithi nkqo, okanye icandelo lobungcali. Olu nyuselo lonyukayo kumgangatho ophezulu wokudibanisa kunye nenqanaba lezihloko linyathelo elibalulekileyo ekudaleni imeko yokukhangela esekwe kwixabiso kwiGoogle kwi-Intanethi yale mihla.
Umzekelo weSiza esiliQele ekuHambeni kweTrust
Olu tshintsho, lulonke, lulungile kushishino lwethu. Okokuqala, basisusa ngokudibeneyo kwisikolo esidala sokwenza izinto ngegama elingundoqo- ngokusisiseko, ukulayisha iphepha lewebhu ngamagama aphambili okanye amanani kumzamo wokusebenzisa inqanaba lesiza kwiziphumo zophando lukaGoogle. Okwesibini, ubume bomhlaba obungenabuninzi obulinywe kukuhamba kokuthenjwa ™ kugxilwe ngumsebenzisi, ekugqibeleni kulinganisa abathengi bafumana oko bakufunayo kwimizamo yakho yokuthengisa.
Ngokucacileyo, ukuthembela kokuhamba ™ yindlela efanelekileyo yokufumana ibhendi. Kodwa, ubeka njani ukuba isebenzele wena kunye neqhinga lakho lophawu? Ukunceda, sidale esi sikhokelo somthengisi esikhawulezayo, sigqibezela ngeengcebiso ezintlanu ezilula zokukuxhasa xa ujikeleza indawo entsha ye-SEO, kwaye uqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho inxibelelana nezinye iiwebhusayithi zokuthengisa ezidijithali ezikumgangatho ophezulu.
Ingcebiso 1: Yakha iqhinga lakho kwisiseko sokuyila, umxholo wesiko.
Sonke siyazi ukuba ukuvelisa umxholo rhoqo kuphezulu kuluhlu lweemfuno zikaGoogle, kodwa ukwenza umxholo ofanelekileyo kunye nomxholo kubaluleke ngakumbi.
Ngokwenza umxholo wentengiso yakho (okt, umyalezo onesihloko kwaye uhambelana neemfuno zabo), abasebenzisi abachaphazelekayo baya kutyelela indawo yakho, kwaye uyokonwabela ukungqubana kwamanqaku egunya kwisihloko esithile ekuthethwa ngaso. Ukuphakama kokuthembela kwakho ™ (okanye umgangatho ongasemva kwe-backlink), kokukhona uya kubekwa kuGoogle. Eyona nto ibalulekileyo, yile ndlela kaGoogle yokuqinisekisa imithombo yolwazi kwaye uyibeke kufutshane encotsheni yokukhangela abafundi ukuba bafumane.
Yenza umxholo omtsha, onolwazi kakhulu, kwaye ngokwendalo uza kufumana i-backlinks enegunya. Izithuba zeendwendwe ngumzekelo omnye wendlela oku kusebenza ngayo. Yinkqubo yezinto eziphilayo ethatha ixesha kunye nesicwangciso-qhinga, kodwa yakha isiseko esiluqilima sophawu lwakho kwaye kufanelekile ukuzama.
Ingcebiso 2: Ziqhelanise nokusetyenziswa kwegama eliphambili.
Emva kotshintsho kumxholo womgangatho kunye ne-backlinking, abanye abathengisi babhengeza amagama aphambili efile. Kodwa enyanisweni, kubaluleke ngakumbi ngoku kunakuqala ukuzilolonga ukusetyenziswa kwegama elifanelekileyo - ukusebenzisa amagama afanelekileyo kwi-niche yakho kunye nabaphulaphuli.
Ukuba ukhaba nje igama-lamagama aphambili e-SEO, qala ngomgangatho wegolide. Izikhangiso zeGoogle iyaqhubeka ukuba yenye yeendlela ezilungileyo zokukunceda ufumane awona magama aphambili, kunye nokuzisa olona khokelo lusemgangathweni. Yidibanise ne- isisombululo sokubamba idatha, Kwaye awuyi kuba nedatha enamandla kuphela kwithemba lakho-uya kuyazi nento ebazisayo kwiwebhusayithi yakho.
Ingcebiso 3: Qhubeka ulandele imigaqo ezalisiweyo-kunye neyinyani xa isiza kwiimpawu zemeta, iinkcazo kunye nexesha lokulayisha ngokukhawuleza.
Imithetho yakudala yeethegi zemeta, iinkcazo kunye nexesha lokulayisha ngokukhawuleza lisenobunzima. Inkcazo kunye neetayitile zezihloko zakha umgangatho wesiza kunye negunya kunye nokuhambelana kwemixholo, okulingana nokuhamba ngokuthembekileyo okungcono ™.
Ingcebiso 4: Yenza kube lula kubasebenzisi bakho ukuba bafumane into abayifunayo.
Yenza umxholo kwindawo yakho evumela abasebenzisi ukuba bafumane ngokulula ulwazi okanye amacandelwana. Ayizukuphela ngokwenza eli cebo lokudala umdla obonakalayo- iya konyusa ukuhlangana kwaye yehlise izinga lokuncipha, izinto eziphambili ekumiseleni iTopical Trust Flow ™.
Ingcebiso 5: Gcina imilinganiselo kuluhlu lwezinto oza kuzenza.
Njengabathengisi, umlinganiso ungundoqo ekubonakaliseni impumelelo yethu-kwaye okona kubaluleke ngakumbi, kukuphinda iinzame zethu kwixa elizayo. NjengePageRank, ukuhamba kwetrasti ™ kunako kwaye kufanele kulinganiswe. Zama ezi ndlela zokuhamba ngokukhululeka kwetrasti, kubandakanya nezongezo ze Google Chrome kwaye Firefox, kunye noMhloli weWebhusayithi weWebhusayithi Isicatshulwa sokuhamba kunye nokujonga ukuKhangela kokuKhangela.
tags: umgangatho wekhonkcoamakhonkcoenkulu leyoukuhamba kwethemba